मुख्यमन्त्री राउतको गफै ठूलो, ३ महिनामापनि प्रदेश सरकारले किन्न सकेन भेन्टिलेटर, बिरामी उपचार बिना मार्दै - Yatra Daily
Home Headline मुख्यमन्त्री राउतको गफै ठूलो, ३ महिनामापनि प्रदेश सरकारले किन्न सकेन भेन्टिलेटर, बिरामी...
मुख्यमन्त्री राउतको गफै ठूलो, ३ महिनामापनि प्रदेश सरकारले किन्न सकेन भेन्टिलेटर, बिरामी उपचार बिना मार्दै
वीरगञ्ज १७ श्रावन । कोरोनाभाइरस महामारीले सम्पूर्ण संसार आक्रान्त बनेको बेला नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । पछिल्लो समय नेपालमा घट्दो कोरोना सङ्क्रमितहरुस सङ्ख्या एक पटक पुन: उभो लागेको छ । विगतका दिनहरुमा विशेषगरी प्रदेश नं. २ का विभिन्न जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितहरुको संख्या ह्वातै बढेको छ ।
प्रदेश नं. २ को पर्सा, रौतहट, बारा, धनुषा र सप्तरीमा पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्ध भएको छ । कोरोना सङ्क्रमितहरु थपिनाका साथ् मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । तर, यो सबै भइरहँदा प्रदेश नं. २ मा लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा रहेको सरकार भने मूकदर्शक मात्र बनेर बसेको छ ।
प्रदेश नं. २ का विभिन्न जिल्लामा रहेका सरकार अस्पतालका बेथती, क्वारेन्टिनहरुको अवस्था र सिमा नाकामा देखिएको लापरवाही यसको प्रमाण हुन् । प्रदेश सरकारको लापरवाहीका कारण गत आइतबार एउटा जनकपुरमा भएको एउटा घट्नाले सबैलाई स्तब्ध वनाएको छ । प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा भेन्टिलेटरको आभावमा एक ३८ वर्षीय युवकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचाररत धनुषा सहिदनगरस्थित डुमरियाका ३८ वर्षीय युवकको गत आइतबार भेन्टिलेटरको आभावमा मृत्यु भएको छ । फोक्सो र मुटुमा समस्या देखिएका युवकलाई ज्वरो र रुघाखोकी लागेपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गरिएको थियो । आकस्मिक कक्षमा उपचार चलिरहेका युवकको स्वास्थ्य अवस्था अचानक बिग्रिन थाल्यो र उनको स्वाब पनि संकलन गरियो । स्थिति गम्भीर बनिरहेका उनलाई चिकित्सकले भेन्टिलेटरमा सिफ्ट गर्न खोजे । प्रादेशिक अस्पतालमा रहेका तीन वटै भेन्टिलेटर प्रयोगमा रहेको भन्दै अस्पताल प्रशासनले उनलाई आईसीयूमा मात्रै सिफ्ट गरिदिए । युवकलाई भेन्टिलेटर तुरुन्तै आवश्यक थियो ।
स्वास्थ्यकर्मीले भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन असमर्थता देखाइरहे । यता, ति युवक सिकिस्त भइरहेका थिए । भेन्टिलेटरको आभावमा प्रादेशिक अस्पतालका मेसु नागेन्द्र यादवका अनुसार परिवारकै आग्रहमा अस्पतालले युवालाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रिफर गरिदियो । धरान जाने क्रममा ती युवकको सिरहाको मिर्चैयामा पुग्दानपुग्दै मृत्यु भयो । ‘ती युवकको मृत्यु हुनु र उसको स्वाबको रिपोर्ट आउनु सँगसँगैजस्तो भयो,’ मेसु यादवले भने, ‘रिपोर्टले हामी आश्चर्यचकित भयौं । रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ त छँदै थियो, त्यसमा पनि कोरोना भाइरसको हाइडोज थियो ।’ ती युवक केही दिनअघि मात्रै भारतबाट मल लिएर फर्किएका थिए । ‘भेन्टिलेटर तुरुन्तै उपलब्ध भएको भए बाँच्थ्यो कि?’ मृतकका परिवारको भनाइ छ ।
प्रदेश २ का सरकारी अस्पतालमा ७ वटा भेन्टिलेटर मात्रै चालु अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटर अभावमै संक्रमितको मृत्यु हुन थालेपछि ५० वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि आलटाल गर्दैछ ।
प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको ६८ करोड बजेटबाट २ वटा पीसीआर मेसिन, ५० भेन्टिलेटर, पीपीई, सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोब र अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई अधिकार सुम्पिएको थियो । ती भेन्टिलेटरबाट ६ जिल्लालाई ५–५ वटा र जनकपुर तथा वीरगञ्जमा १०–१० दिइने योजना थियो ।
गत आइतबार राति भेन्टिलेटर नपाएपछि रिफर गरिएका संक्रमितको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक हुँदा मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुरस्थित निवासमा आकस्मिक बैठक बोलाए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिनेश ठाकुरसँग ‘पैसा निकासा गर्ने निर्णय हुँदा पनि भेन्टिलेटर किन किनिएन?’ मुख्यमन्त्री राउत कड्किए । प्रस्ट जवाफ नदिएपछि राउतले बैठकमै उनलाई हप्काए । ‘भेन्टिलेटर अभावमा मान्छेको मृत्यु हुन थाल्यो । बजेट दिँदा पनि किन किनिएन ? तपाईंहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने,’ मुख्यमन्त्री राउतले निमित्त सचिव ठाकुरलाई हप्काएको प्रसंग सुनाउँदै बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘मुख्यमन्त्रीजी निकै आक्रोशित हुनुभयो ।
स्वास्थ्य आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख डा. प्रमोद यादवका अनुसार भेन्टिलेटर खरिदका लागि असार ३ मा स्रोत सुनिश्चितताको पत्र आएको थियो । असार ५ मा टेन्डर गरिएको र १५ गते टेन्डर खोलेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यही बीचमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेको सरुवा हुँदा खरिद प्रक्रिया असारमा पूरा हुन नसकेको बताए । ‘खरिद प्रक्रिया नै असारको मध्यतिर थाल्दा ढिलाइ भयो । सचिवज्यूको सरुवाले पनि प्रक्रिया रोकियो,’ यादवले भने, ‘अब पनि प्रक्रिया अगाडि बढे १५ दिनमा भेन्टिलेटर खरिद गरिसकिन्छ ।’ आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
Previous articleइस्लाम धर्मावलम्बीहरूको दोस्रो ठूलो पर्व बकर ईद आज मनाइँदै
Next articleकोरोना सङ्क्रमितको शव व्यवस्थापन गर्न खोज्दा झडप, एसपी पन्तसहित ७ प्रहरी घाइते